Dostoevskiy. Mitsara yemabasa ake pagore rekufa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Dostoevskiy. Mitsara yemabasa ake pagore rekufa kwake
Dostoevskiy. Tsanangudzo yemufananidzo waVasily Perov.
Fyodor Dostoyevsky inofungidzirwa kwete chete mumwe wevanyori vakanyanya russian izvo zvaivapo, asi imwe yeakanakisa ese nguva. Akafa pazuva rakaita nhasi muna 1881 muSaint Petersburg. Basa rake rakagadzirisa magariro uye zvematongerwo enyika eiyo Tsarist Russia zvakanyanya kuoma. Muchokwadi, akatongerwa rufu muna 1849 seanomukira uye, nguva pfupi asati aurayiwa, Tsar Nicholas I akachinja mutongo wake kuenda kumakore anoverengeka ebasa rekumanikidzwa. Kumirira kufa kwemazuva kwemazuva kwakamuratidzira uye kwakakanganisa basa rake rekunyora.
Hama dzaKaramazov, Benzi, Mhosva uye Kurangwa o Mutambi ndivo mareferenzi emabhuku akakosha kwazvo ezana regumi nemapfumbamwe emakore ekuva mienzaniso yeruzivo rwakadzama rwe Dostoevskiy wepfungwa dzevanhu. Mavari akagadzira mavara anoratidza kupenya uyezve nerima remweya. Aya ndiwo mamwe mitsara akasarudzwa kubva kune iwo mazita ekukuyeuka iwe pazuva iri.
1 Mhosva uye Kurangwa
3 Hama dzaKaramazov
Mhosva uye Kurangwa
Iwe unongogara kamwe chete, uye ini handidi kutarisira iwo mufaro wepasirese. Pamusoro pazvose, ini ndoda kurarama. Dai asina kunzwa chishuwo ichi, zvaive nani kusave nehupenyu.
Chikonzero ndiye muranda weshungu.
Muzuva redu, mari ndiyo inotapira kupfuura dzose.
Zvese zvinobatsira kuvanhu zvakanaka.
Urombo hausi huipi.
Tsitsi ndiwo mukuru uye pamwe ndiwo wega mutemo wekuvapo kwevanhu.
Chiitiko chinogadzirisa uye chinoratidza kuti haugone kurarama uchitora mukana wenguva yega yega. Hazvigoneke.
Chii chakashata uye chinoshoreka pamari ndechekuti inotopa matarenda.
Dai asina kufa. Kana vakandidzosera hupenyu hwangu. Iko kusaguma kwaizovhura pamberi pangu! Izvo zvaizoshandura mineti yega yega kuita zana rehupenyu; Ini handingazvidze imwe chete nguva uye ndoteedzera maminetsi ese kuti ndisatambisa iwo.
Dai dhiabhorosi abvisa varume ava vese nechiso chakaumbwa nemazana emakore uye avo vanongotakura mukati mavo charlatanism uye kunyepa!
Ani naani anozvinyepera uye anoteerera manyepo ake anouya kuzosiyanisa chero chokwadi, kana maari, kana chakamupoteredza.
Munhu akagadzira Mwari. Asi izvo hazvisi izvo zvisinganzwisisike, uye hazvishamise kuti Mwari aivapo zvechokwadi; Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti zano rakadai raigona kuve rakamuka muuropi hwemhuka inotyisa uye yakaipa semunhu, nekuti iri zano dzvene, rinofamba, rakadzika kwazvo uye rinokudza munhu zvakanyanya.
Maonero angu ndeekuti kana dhiabhorosi asipo, kana akasikwa nemunhu, akazviita nemufananidzo wake uye akafanana.
Kune masimba matatu, matatu akasarudzika masimba pasi pano anokwanisa kukunda nekukwezva kuziva kwevasina simba vapanduki zvachose, nekuda kwemufaro wavo. Izvo ndezve: chishamiso, chakavanzika uye chiremera.
Kutaura chokwadi, ini handioni chero chakasviba mune chishuwo chekuhwina zvakanyanya sezvinobvira uye nekukurumidza sezvazvinogona.
Sekusetsa sekuvimba kwangu kukuru mune zvakanakira roulette kungaite kunge, zvakatonyanya kuseka ndiwo maonero aripo ekuti hazvina musoro uye kupusa kutarisira chero chinhu kubva mumutambo. Uye nei kubhejera kuchifanira kuve kwakaipisisa kupfuura chero imwe nzira dzekuita mari, semuenzaniso, kutengeserana? Chinhu chimwe ndechechokwadi: icho chimwe chete pane zana zana chinokunda. Asi zvine basa rei kwandiri?
Panguva iyoyo ndaifanira kunge ndakaenda pamudyandigere, asi kunzwa kusinganzwisisike kwakauya pamusoro pangu: chishuwo chekutsamwisa Fate, kutamba joko, kuburitsa rurimi rwangu. Ndakaisa njodzi pachiyero chakabvumidzwa, zviuru zvina zvemaruva, ndikarasikirwa… Ipapo, ndakakatyamadzwa, ndikasiya tafura.
Handina kuziva kwenguva yakareba zviri kuitika munyika, muRussia kana pano ... Iwe unoziva kwazvo izvo pfungwa dzangu dzinotora. Sezvo ini ndisina kana tarisiro kadiki uye mumaziso ako ndiri chinhu chisina maturo, ndichakuudza pachena: ndinokuona chete. Uye ini handina basa nezvimwe. Ini pachangu handizive kuti sei ndichimuda seizvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Dostoevskiy. Mitsara yemabasa ake pagore rekufa kwake
Ann Radcliffe. Piyona wekutyisa kwegothic wezana ramakore rechiXNUMX